उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ वर्ष प्रतियोगिता
नयाँ वर्ष प्रतियोगिता उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि र क्रिसमस कार्यक्रम को सबै भन्दा रमाइलो भाग गठन। तिनीहरूले सधैं ठूलो अघिबाटै जान्ने काम संग प्रतीक्षा थिए, सबैलाई तिनीहरूलाई भाग लिन चाहन्छ। सामान्यतया संलग्न साँझ को अन्त गरेर मा लगभग सबै वर्तमान अतिथि छन्। नयाँ वर्षको लागि प्रतियोगिताहरूमा उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि मात्र होइन यो छुट्टी विषयको लागि समर्पित छन्। तिनीहरूले सधैं आफ्नो originality र विविधता मा हडताली छन्।
तपाईं एउटा रोमाञ्चक प्रतियोगिता, भनिन्छ खर्च गर्न सक्छन् "को वर्णमाला को अध्ययन।" प्रमुख खोल्ने बोली सबै शिक्षित मान्छे हो कि घोषणा, तर यदि तिनीहरूले वर्णमाला थाहा? खेल नियम पालो मा वर्णमाला खेलाडीहरू हरेक पत्र हालको छुट्टी अनुसार, एक अभिवादन वाक्यांश भन्न पर्छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। ए उदाहरण पाठ को पहिलो अक्षर जस्ता आवाज थियो: "यो नयाँ वर्ष सबै बधाई ओह कसरी Hurts!" अर्को पत्र बी वाक्यांश हुन सक्छ: "नयाँ वर्ष केवल कुना सावधान रहनुहोस्!" पत्र एक वाक्यांश अनुरूप हुन सक्छ: "यहाँ महिलाहरु गर्न छ ! "। सबैभन्दा रमाइलो सुरु पालो अक्षरहरू टी, यू, एफ, एन, Z, एल आउँदा जो मजेदार वा मूल वाक्यांश संग आउन ती, एक पुरस्कार जित्छ।
भनिन्छ अर्को रमाइलो प्रतियोगिता "द माँ।" यसलाई जो चार आवश्यक लागि दुई खेलाडी को दुई टोली गठन गर्दै हुनुहुन्छ। "Mumiatorom" - प्रत्येक टोलीबाट एक सहभागीले "आमा", अर्को हुनेछ। खेल बाद चाँडै पट्टियाँ "आमा" र्याप गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन्। शौचालय कागज भौतिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मजा उपस्थित प्रदान गरिनेछ। को घुमावदार को अन्त पछि कागज को एक रोल unwinding को उल्टो कदम गर्न सकिन्छ।
उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ वर्ष प्रतियोगिता सान्ता क्लाज लागि प्रतिस्पर्धा बिना गर्न सक्नुहुन्न। यो प्रतियोगिता "फ्रस्ट सांस" प्रत्येक सान्टा क्लाउस अगाडि तालिका मा एक कागज हिमपात राखिएको छ। हिमपात त्यो तालिकाको विपरीत अन्त देखि उड्यो भनेर टाढा झटका गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई अन्तिम तालिका, विजेता आफ्नो पहिलो हिमपात उडायो गर्ने एक, र एक अन्तिम यसलाई गरे जो थियो कि प्रमुख अमेरिका गएपछि। यो उहाँले बलियो ठण्डा सास उहाँलाई तालिका स्थिर हिमपात छ भन्ने हो, क्रमशः, को सान्टा क्लाउस र पुरस्कार प्राप्त गर्दछ।
उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ वर्ष प्रतियोगिताहरु पनि अधिक रोमाञ्चक भएका छन्, सबै भन्दा राम्रो हिम सेतो लागि एक प्रतियोगिता हो। तिनीहरूलाई प्रत्येक यस्तो सैंडविच वा फल सबै प्रकार को एक मूल संरचना (उत्पादनहरु एक छुट्टी तालिका लाग्न सक्छ) को रूपमा आफ्नो उत्सव भोज तयार छ। शैली नयाँ वर्ष हुनुपर्छ। त्यसपछि ती सबै blindfolded, बरफ मेडन, जवान मान्छे अगाडि तल बस्न। विजेता उनको पहिलो अतिथि खुवाउन सक्षम हुनेछ जसले केटी हुन्छ।
अझ ठूलो चासो बैंकनोट्स को प्रयोग संग उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ वर्ष प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगिता "टमाटर" प्रत्येक अन्य सामना गर्दै दुई स्वयंसेवकहरु आवश्यक हुनेछ, र मल बीच राखिएको छ। यो प्रमुख नोट राख्दछ र त्यसपछि दलहरू चाँडै उनको एक हात राख्नु पर्छ तीन गणना। कसले यसलाई पहिलो, उहाँले पनि (तपाईं ठूलो चासो लागि विजेता पैसा दिन सक्छ) जित्यो गर्नेछ। तर यो प्रतियोगिता को अन्त छैन। कार्य तथ्यलाई द्वारा जटिल छ एक मल मा नयाँ बिल राखिएको छ, र खेल को सहभागीहरू blindfolded। जस्तै, तिनीहरूले यो-साइट छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ। त्यसपछि, को खर्च मा "तीन" दुवै खेलाडीहरू चाँडै चालै नपाई खाता राख्नु नेतृत्व जो टमाटर, मा थप्पड मारा। देख्ने सँगै बसेर रमाइलो।
उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि धेरै प्रतियोगिताहरु पहिले नै निश्चित लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। तिनीहरूलाई बीच, प्रतियोगिता "पोशाक हिम सेतो।" प्रत्येक सान्टा क्लाउस एक जोडी छनोट र यसलाई आफ्नो पूर्व थप आधुनिक देख्यो थियो भनेर माथि उनको लुगा। कस्मेटिक्स, क्रिसमस सजावट, अतिरिक्त वस्त्र: तपाईं कुनै पनि आइटम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विजेता को सान्टा क्लाउस, workmate धेरै मूल देखिन्छ जो छ।
विवरण र रोचक विचार: लिपि "एक स्वस्थ जीवन शैली लागि Propaganda टोली"। एक स्वस्थ जीवन शैली लागि परिदृश्य प्रचार टोली प्रदर्शन
छुट्टी को पुस्तामा - दिन को वायु सेना को
इपिफ्यानी Name पौडी: अनुष्ठान, मनोरञ्जन वा खतरा?
कसरी इटाली नयाँ वर्ष मनाउन
बल को संख्या - यो कसरी गर्न?
प्राचीन चिनियाँ मिथक। देवताहरूको र मानिसहरूको संसारको सृष्टि
उज्यालो स्विच जडान। dvuhklavishnogo प्रकाश स्विच जडान
कार्य क्यामेरा SJ4000 SJCAM वाइफाइ: विशेषताहरु समीक्षा र प्रशंसापत्र
जैविक र अकार्बनिक पदार्थ कक्षहरू
थोमस परीक्षण: को द्वन्द्वमा व्यवहार प्रकार
आर्किटेक्ट सान्टियागो Calatrava र यसको प्रसिद्ध परियोजनाहरू
समुद्र otters सुतिरहेको जस्तै? समुद्र otters: रमाइला तथ्य
"Reamberin": प्रयोग, टिप्पणीहरू, निर्देशन, analogs लागि सङ्केत गर्छ
अग्र-दल कलाकारहरूको। 20 औं शताब्दीको रूसी अग्र-दल कलाकारहरूको
बिल्ली को बच्चा बङ्गाल: प्राप्त सबैभन्दा मिल्ने साथी
Yaroslavsky स्टेशन बाट Domodedovo प्राप्त गर्न कसरी र उडानको लागि ढिलो गर्न
सलाद "ट्राफिक लाइट" - एक, उज्ज्वल स्वादिष्ट, उपयोगी! हामी यस विनम्रता लागि व्यञ्जनहरु सिकिरहेको